Gonzo's Quest Megaways TM | Nyochaa Online - cheapinternetsecuritysoftware.com
Gonzo’s Quest Megaways TM | Nyochaa Online
By Mildred Coleman On June 4, 2021 No Comments
Ekele maka teknụzụ ọhụụ ọhụụ kachasị ọhụrụ, otu n’ime oghere ndị ama ama na mba enyerela onye ọ bụla aka karịa Red Tiger. Ihe kachasị ọhụrụ na mmelite nke payline nke sitere n’ike mmụọ nsọ, Gonzo’s Quest Megaways TM ka atọrọ iji were njem nke onye mmeri, na nke gị, na ọkwa ọhụrụ.
Aha ọhụrụ a meriri ebe obibi anyị Vegas na 23 July 2020, ya mere nọrọ na-ege ntị!
Ntọala, usoro, na ozi ahụ ka bụ otu. Agbanyeghị, oge a mgbe ị sonyere Gonzalo Pizarro plucky, njem ahụ nwere ike bụrụ ọtụtụ wilder. Ka ị na-egwu egwu site na obodo El Dorado furu efu, a na-enyere ndị na-achọ akụ na ụba oge ochie aka site na ọnụọgụ ọnụọgụ dịnụ na ntụgharị ọ bụla!
Akụkụ niile nke nkwalite Megaways TM, igwe ọrụ a abụghị naanị na ị na-ahụ na njem gị jupụtara na ntụgharị na ntụgharị, mana na ị nwere ụzọ 117,649 iji merie. Tupu ị kpaa nkata a ụzọ furu efu obodo nke gold na-egwu maka max payout topping 20,000x gị osisi, i kwesịrị a map. Nke a Gonzo’s Quest Megaways TM bụ ndu gị. Inweta gị si akpa atụ ogho kwupụta esi anwụde jupụtara nwere, a online oghere nyochaa ga-etinye gị na ezi ụzọ.
Yabụ, ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwọ ụgbọ mmiri maka El Dorado wee chọpụta ihe ọhụụ na teknụzụ oghere, ka anyị bido.
Afọ ahụ bụ 1541, ị hụkwara onwe gị n’ime ụgbọ mmiri na-ese n’elu mmiri ebe dị n’ụsọ oké osimiri Peru. N’ebe dị anya, ị hụrụ otu agwaetiti. Ibu uzu na mbido, ala a ji nwayọ nwayọ na-elekwasị anya ka ị na-eru nso. Ọ bụ n’oge a ka Gonzo jidere map ya wee mee ngwa ngwa maka ihe o kwenyere bụ obodo furu efu El Dorado. Nkwa nke akụnụba Mayan na-akpali gị ịgbaso onye na-atụ ụjọ na-eme nchọpụta gaa n’akụkụ osimiri. N’ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe ncheta mgbe ochie nke ejiri okwute mee.
Ejiri akara agbụrụ mara ihe mgbochi ọ bụla nke yiri ka ọ bụ ụdị ụkpụrụ. Ọ bụ n’oge a ka ị ghọtara na ị na-eguzo n’ihu ọnụ ụzọ ámá El Dorado. Otú ọ dị, naanị ndị na-achọta njikọta kwesịrị ekwesị nwere ike ịbanye. Na na, gị online ohere mpere njem amalite. Na-ahapụ ntọala ndị ahụ n’efu na ntụgharị nke ọ bụla, na-amara na ọkụ bụ isi ihe na-emeghe akpọrọ. You ga-agbaji koodu ahụ wee chọta ụzọ banye obodo ọlaedo furu efu? Naanị oge ga-agwa.
Gịnị bụ Megaways TM Ohere mepere?
Tupu i nwee ike igbanye na Quest nke Gonzo ma nweta ihe oghere ohuru a nwere inye, I kwesiri ima ihe Megaways TM putara. Nke a online oghere ọhụrụ e kere site Big Time Gaming. Ọ na-ewe usoro a na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ nke oghere ndị na-ewu ewu ma na-eme ka ihe maa jijiji. Site na iwebata uzo ozo na ichota ihe akara, Megaways TM na eme ka o kwe omume ime ka otutu uzo di iche iche iji merie uzo obula.
Dịka ọmụmaatụ, na otu ntụgharị, ịnwere ike ịnwe ụzọ 100 iji merie. Na-esote, ị nwere ike ịnwe 5,000. Na tandem na ịgwakọta ọnụ ọgụgụ nke paylines, Megaways TM na-eme ka njikọta mega kwe omume. N’ihi na-esi anwụde na-setịpụrụ n’ụzọ dị otú ahụ na dị iche iche na sized akara ịda na random usoro, ọ nwere ike imeghe ọzọ payout nwere karịa gị nkezi oghere. N’ezie, ọ bụrụ na ihe adaba n’ụzọ ziri ezi, Gonzo’s Quest Megaways TM ga-enye gị ụzọ 117,649 iji merie site na otu ntụgharị!
Etu esi egwu Gonzo Quest Megaways TM
Iji kpọọ egwuregwu ahụ, ọ dị mfe. Malite site na ịhọrọ nzọ gị. Ọhụrụ Gonzo’s Quest nwere oke ịkụ nzọ na-agbanwe agbanwe, n’ihi ya ị nwere ike ịdọrọ n’etiti 10 0.10 na € 10 na ntụgharị. Debe nzọ gị, ị ga-emeghe ụzọ isii ahụ ma debe mgbochi ahụ.
Ihe dị iche na Gonzo’s Quest, nke mbụ na nke Megaways TM, bụ na akara ngosi dabara n’ọnọdụ kama ịgbanye. Nke a abụghị naanị na –emepụta mmetụta dị iche, mana setịpụrụ ihe a maara dịka nnukwu atụmatụ.
Gonzo’s Quest Online Slot Symbol
Ebe ọ bụ na nke a bụ ọnụ ụzọ ámá nke obodo furu efu El Dorado, akara ngosi ndị kwesịrị ekwesị. Ejiri ọ bụla mechie ihe mgbochi ọ bụla. Na otu otu dobe, okpukpu isii nwere ike ịnabata n’etiti abụọ na asaa nke akara Mayan ndị a:
K ‘uk’ (quetzal) K ‘awil (spirit) Chan (agwọ) Hoy
Na mgbakwunye na akara ngosi ọkọlọtọ, Gonzo’s Quest Megaways TM gosipụtara akara ngosi ihe omimi n’ụdị akara ajụjụ. Dochie anya maka akara ndị ọzọ niile, anụ ọhịa a nwere ike ịpụta ugboro abụọ na otu agba ma nwee ike inye aka mejupụta njikọta. N’ikpeazụ, iji kpalite ego ego na-enweghị ego, mkpụrụ ego ọla edo ga-adaba. Mkpụrụ ego atọ ma ọ bụ karịa (ma ọ bụ mkpụrụ ego abụọ gbakwunyere ọhịa) ga-ebute ego ahụ ma nye gị ohere ị ga – eji merie.
Gonzo’s Quest Megaways TM youtskwụ ụgwọ na ego
Oghere ndị Megaways TM dị n’ịntanetị juputara na ha n’ihi na ị nwere ihe ruru 117,649 paylines na spin ọ bụla. Nanị ike a pụtara na otu ntụgharị nwere ike ịmeghe ụgwọ dị iche iche. Na egwuregwu a, na-emeri n’ịgwa na-guzobere mgbe ụyọkọ nke atọ ma ọ bụ karịa kenha akara kwụ n’ahịrị.
Ndepụta dị n’okpuru na-egosi ego ị ga – emeri mgbe ị dakọtara opekata mpe akara atọ yana opekata mpe isii. Ọ dị mkpa iburu n’uche na ị ga-emerikwa nrite mgbe ị dakọtara akara anọ na ise.
Gonzo’s Quest Megaways Nrite
K ‘uk’ (quetzal) = mmeri n’etiti 0.1x na 0.5x osisi giK ‘awil (mmụọ) = mmeri n’etiti 0.2x na 0.5x osisi gịChan (agwọ) = mmeri n’etiti 0.2x na 0.7x osisi gịHoy = mmeri n’etiti 0.2x na 0.8x gị osisiGrey nkume chi = merie n’etiti 0.3x na 1x osisi gị Yellow god god = merie n’etiti 0.4x na 1.2x gị osisiGreen Stone chi = mmeri n’etiti 0.5x na 2x osisi gị Blue nkume chi = mmeri n’etiti 0.7x na 4x osisi gị nke chi = merie n’etiti 1x na 15x osisi gi
Usoro Megaways TM pụtara na ị nwere ike ịme ọtụtụ njikọta otu mmeri. Yabụ, ọ bụ ezie na usoro akara nke akara atọ nwere ike ọ gaghị eyi oke ọrụ, nke a nwere ike ịbụ otu n’ime ụyọkọ mmeri na-esi n’ike. N’adịghị ka ọtụtụ oghere dị ugbu a, Gonzo’s Quest na-arụ ọrụ na-agbakọta. N’aka ozo, otutu ihe nnochi pere mpe nwere ike itughari n’ime ugwo buru ibu.
N’ezie, ihe ga-akawanye njọ ma ọ bụrụ na ị tụnye akụkụ nke nnukwu oghere a. Imeri ngwakọta ga-ebute nnukwu mmiri. Nke a pụtara na akara ngosipụta ndị mepụtara njikọta mmeri na-apụ n’anya ndị ọhụrụ ga-adaba n’ọnọdụ ha. Ọ bụrụ na nnukwu ahụ mepụta nchikota mmeri ọzọ, a ga-emegharị usoro ahụ ọzọ.
Kwa afọ ọ bụla nnukwu mmiri na-eme ka mita na-abawanye ụba na ọkwa. Soro na-emeri njikọta na-abawanye uru. Na Gonzo’s Quest Megaways TM ndị na – amụba ụba na – abawanye n’ụzọ dị otu a rue mgbe ị ga – ejupụta ma ọ bụ kaghị mmeri
1x nnukwu mmiri = 1x ọnụọgụ abụọ 2x ọtụtụ = 2x ọtụtụ 3x azịza = 3x ọnụọgụ4x nnukwu ọnụọgụ = 5x ọtụtụ
Ọ bụrụ n’inwere ike ịkpalite ihe ntụgharị efu (nke a maara dị ka Free Falls), a na-enye ndị na – eme gị ọtụtụ mmụba. Site na idobe na okpukpu atọ (mkpụrụ ego), ị ga-enweta itoolu na-enweghị atụ. Na-akpalite nnukwu mmiri n’oge ego a ma onyinye gị ga-abawanye site 3x, 6x, 9x na, n’ikpeazụ, 15x.
Na ikpe azu, maka onu ahia kariri, Gonzo Quest Megaways TM bu “ala oma jijiji”. Dị ka nnukwu mmiri, ala ọma jijiji na-ama jijiji ma mepee ohere ndị ọzọ. Otu ha si eme nke a bu iwepu akara di ala. Ala ọma jijiji na-ebute na enweghị usoro, yabụ na ị maghị mgbe ha ga-akụ. Agbanyeghị, mgbe ha mere, akara ngosi dị oke ọnụ ahịa ga-adaba na ngwakọta ma nye gị ohere ịme nchịkọta na-emeri ya na inwekwu ụgwọ ịkwụ ụgwọ.
Gonzo’s Quest vs Gonzo’s Quest Megaways: The Showdown
Tupu anyị enye gị ụfọdụ ndụmọdụ banyere etu esi egwu egwu oghere ntanetị, ka anyị were Gonzo Quest Megaways TM tụnyere nke izizi. N’ozuzu ya, egwuregwu abụọ ahụ yitụrụ. N’ime ha abụọ, ebumnuche gị bụ imepe ọnụ ụzọ ilu El Dorado site na ijikọta akara ngosi nke Mayan. Ha abụọ nwekwara njirimara nnukwu mmiri na mmeri na-ebute ihe na-akpata 5x multipliers. N’ikpeazụ, Free Falls (free spins) gburugburu dị na egwuregwu abụọ.
Ihe mbụ Gonzo’s Quest
Maka myirịta niile dị n’etiti oghere abụọ dị na ntanetị, enwekwara ụfọdụ iche. Gonzo’s Quest na-egosi okpukpu ise, paylines 20, na nzọ sitere na € 0.20 ruo € 50. N’aka nke ọzọ, Gonzo’s Quest Megaways TM nwere okpukpu isii, rue ụzọ 117,649 iji merie na nzọ sitere na € 0.10 ruo € 10. Versiondị Megaways TM nwekwara ike agbakwunyere nke njirimara ala ọma jijiji.
Egwuregwu sitere na Gonzo’s Quest Megaways
The ọzọ bụ isi ihe dị iche n’etiti abụọ ndị a na-ewu ewu ohere mpere bụ payout ikike. Gonzo’s Quest nwere ugwo ugwo di elu rue 2,500x osisi gi. Gonzo’s Quest Megaways TM nwere ihe nrite kachasị elu karịa 20,000x. Nke a, yana nnukwu mmiri na multipliers, pụtara na ị nwere ike imeri karịa Gonzo’s Quest Megaways karịa nke mbụ.
Nkwado anyị: Gwuo egwuregwu abụọ ma hụ otu ha abụọ si jiri atụnyere!
Gonzo’s Quest Megaways TM Atụmatụ na atụmatụ
Oghere ntanetị na-enwe obi ụtọ. Ihe Gonzo choro abughi ihe di iche. Na agbanyeghị ma igwu egwu mbụ ma ọ bụ nke Megaways TM, ị kwesịrị ị na-agba nzọ mgbe niile n’ogo nke dabara n’ụlọ akụ gị, ma ghara ilekwasị anya na onyinye. Na-echeta mgbe niile na ohere mpere bụ egwuregwu nke ohere, ma kpọọ akpọrọ!
Imeri mmeri kwesiri ibu ihe obi uto igwu egwuregwu a. Ptgbaso echiche a ga – enyere gị aka inweta ọtụtụ ihe site na Gonzo’s Quest. Ọdịdị Megaways TM ahụ gbasapụrụ ma gbakwunye ọkwa ọhụụ nke egwuregwu. Tinye na nke a ụfọdụ ihe eserese doro anya na enwere ọtụtụ ihe iji jide gị ka ị na-egwu egwu.
Mgbe ị kekọtara ihe ndị a niile, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara NetEnt’s Gonzo’s Quest ji bụrụ ihe akụrụngwa ozugbo ewepụtara ya na 2013 yana ihe kpatara onye bu ụzọ nke 2020 ji nwee ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụhaala na ị chetara igwu egwu n’ime oke gị ma nwee ọ theụ ahụmịhe ahụ, ị ​​ga-enweta uru ntụrụndụ kachasị site na oghere a dị egwu.
Gonzo’s Quest Megaways TM odi nma?
Ee! Egwuregwu a abughi naanị otu ụlọ ọrụ kachasị azụ ahịa na-azụlite, Red Tiger, ọ bụ ụlọ ọrụ na-anọghị na ya nwalere ma kwado ya. Tupu egwuregwu a enye ikikere ma nye ya ohere ịga na saịtị cha cha na gburugburu ụwa, ekwesighi ịkọ ya na RTP (laghachi na ọkpọ egwu). Nsonaazụ ahụ bịara dị mma yana, yana ịnata nsonye 96% RTP, a kọwaala egwuregwu ahụ dị ka 100% ziri ezi.
Enwere m ike imeri ezigbo ego na-egwu Gonzo’s Quest Megaways TM?
Ee, ị nwere ike. Onu ogugu i meriri adighi ekwe nkwa, ma oke nrita gi gha adabere n’elu osisi gi na ntughari mmeri gi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe niile edozie n’ụzọ kachasị mma, ị nwere ike merie karịa 20,000x gị.
Ebee ka m nwere ike igwu egwu Gonzo’s Quest Megaways TM na ntanetị?
Nwere ike igwu Gonzo’s Quest Megaways na LiveRoulette. Ọ bụrụ n’inwebeghị akaụntụ, ị nwere ike ịdebanye nkọwa gị taa. Ozugbo ị bụ onye otu, ị nwere ike ịme nkwụnye ego, pịgharịa gaa n’ọnụ ụlọ oghere anyị n’ịntanetị, wee nwaa ikpo oke oghere!
Tags:Gonzos Megaways nyochaa Online Quest
Joe Exotic oghere nyochaa (RTP: 95.7%)
Joe Exotic na-enye ndị na-egwu egwuregwu Red Tiger ohere ịbanye …
Robin Nottingham Raiders oghere nyocha (RTP: 96.07%)
Robin Nottingham Raiders bụ oghere na-atọ ụtọ nke Peter & …
You nwere ike ịmalite azụmahịa nke gị cha cha cha cha cha?
Ibido azụmaahịa cha cha n’ịntanetị n’oge a nwere ike ịbụ …